ITI ITAWULI DIY ART KUGULA - IIPROJEKTHI ZASEKHAYA
Ubuchule bemizuzu eli-10 yoBugcisa bokuzifihla kwiDrawer yakho yaseKhitshini
Akukho kunqongophala kweendawo zokuthenga ubugcisa obuthandayo, kodwa ngamanye amaxesha uzingela into eyahlukileyo ngakumbi-kwaye mhlawumbi ungabizi kakhulu. Ukuba kunjalo, oku kunokuba yinto elula kakhulu kuwe.
Intsingiselo yenombolo 555
(Ityala lemifanekiso: Katy Cartland)
Ngelixa obu bugqwetha bobugcisa buyindlela entle yokuphucula udonga ekhayeni lakho, ikwasombulula enye ingxaki eqhelekileyo: Unokwenza ntoni ngeetawuli zakho zeti oyithandayo ongafuniyo ukuzisebenzisa kuba ungafuni ukuba zonakaliswe ngamabala okutya. .
Kwi UMary White kunye noBruno Sabino kutshanje eHouston, eTexas kwigaraji yokuhlala kwigaraji, uMaria uthathe oku $ 26 itawuli yeti evela kuNative Bear , uyishelele ngokulula kule Abaphuculi beeDolophu i-Wooden Printa i-Dowel Hanger kunye ne-voila: Ubugcisa bodonga lwakho obongeza ukuthungwa okuthambileyo, kulula i-AF, kwaye inokuhlangula le nto yasekhitshini kubomi bamabala egrisi.
Ufuna into nokuba ngexabiso eliphantsi ? Khawucinge ukuba yintoni-kukho inguqulelo ye-DIY yale freyimu onokuyisebenzisa ukuze ubuyise itawuli yobugcisa: Uyenza kanjani iMagnetic Isakhelo se-DIY soMsebenzi wobugcisa… ngemizuzu eli-10 .
Le itawuli yeti evela kukhenketho lwendlu endicinga ukuba iya kujongeka intle ijinga eludongeni. (Ityala lemifanekiso: Natalie Jeffcott)
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga nokuqhekeka kobugcisa betiya kaMaria yinto yokuba ayibonakali njengetawuli yeti-ijongeka njengesiqwenga sobugcisa esibiza kakhulu. Olunye uphawu ekufuneka ujonge kulo xa usenza olwakho:
Uyikhupha njani le nto yobugcisa ilula:
Khetha iitawuli zeti ngegrafiki ezimeleyo okanye ipateni ebekwe embindini.
Iphethini ye-edge-edge iya kuziva ingaphantsi kwesiqwenga sobugcisa.
Yenze ibe nemibimbi simahla
Intsimbi okanye umphunga (okanye ukuba unguye, galela kwisomisi) itawuli yakho yeti ngaphambi kokuba uxhonywe. Ilaphu elishwabeneyo liya kubonakala ngathi liluncedo ngakumbi kunobuhle.
Ukuba uthatha isigqibo kwi-DIY isakhelo, cinga ukusebenzisa ukugqitywa kweenkuni ezintle okanye izixhobo zokwenza ukuba isiqwenga sibonakale sinobuchwephesha kunye nomgangatho ophezulu.
I-8888 intsingiselo yesidima somzimba
Khetha indawo efanelekileyo
Itheyile yeti kaMaria equlunqwe isebenza kakuhle njengobugcisa bodonga ngokuchanekileyo kuba ayikho ekhitshini-uyixhoma kwigumbi lokuhlala ngokukhawuleza wongeza umxholo wobugcisa kwisiqwenga. Kwaye uqaphele ukuba itawuli yeti irhangqwe bubugcisa bobuchwephesha njengokuprinta kunye neefoto.
Ubugcisa nantoni na oyifunayo. Ukuba ucinga ukwenza itawuli yeti akusisimumu, yeqa! Ukuba ucinga le yindlela elungileyo yokubonisa iitawuli zeti ezifihlwe kwenye yeedrowa zakho zasekhitshini, yiya ngayo!
Oku Ipeyinti + Petals itawuli yesitya NguBridgette Thornton (ikhaya lakhe kunye nestudiyo sobugcisa esasikhenketha) kwaye oku Itawuli yangoku yeAlchemy —Kokubini okuvela kwiAnthropologie —kuya kujongeka ngathi kuxhonyiwe njengobugcisa.
Umhleli woKhenketho lweNdlu
UAdrienne uthanda uyilo, uyilo, iikati, intsomi kunye nokubukela i-Star Trek. Kule minyaka ili-10 idlulileyo ubizwa ngokuba yikhaya: iveni, indawo eyayisedolophini edolophini kwidolophu encinci yaseTexas kunye nesitudiyo esasinamahemuhemu okuba babekhe bangabanini bakaWillie Nelson.
Njani: Yenza i-Aquarium ngaphandle kweThelevishini endala
Ingcibi yoLondolozo ityhila indlela yokuCoca iindawo eziPhezulu ezi-7 ezenzeka ngeHlobo
Sukuyilahla! Izinto ezi-3 onokuzenza ngeembiza zakho ezaphukileyo kunye nezityalo
Iingcebiso ezi-4 zokugcina iLaptop yakho ingagqithisi ngexesha lasehlotyeni
Kutheni unokuthi ushiye emva kwezityalo zakho ozithandayo xa ushukuma
Izizathu ezi-5 zokuba kutheni Ubona i-999-Intsingiselo ye-999
Yongeza nantoni na evela kuyo nayiphi na iwebhusayithi kwi-Amazon yakho Wish Lists
Uyenza njani iProjekthi yeNkqubo yoBugcisa beSola
Incwadi Entsha kaJoanna Gaines, 'Umntu wasekhaya,' Iyakukunceda Uyile iKhaya eliVaka ngokuQinisekileyo kuwe
Buza uAlice: Ndifuna uMfana endithandana naye ukuba angene ngaphakathi, kodwa hayi izinto zakhe
Iioyile ezi-5 eziLuncedo kakhulu
Ngaba Ukuthenga Ikhaya Kutyala imali? Nantsi indlela Iingcali ezigqiba ngayo
Enye yeendlela ezilula zokwenza uMtyali wakho oJongileyo ajonge phezulu
Uyenza njani iNkanyezi yeKrisimesi yasePhilippines
12 12 zithetha iingelosi
Kutheni ndiqhubeka ndibona i-444
Ithetha ntoni i-777 kwibhayibhile
Ithetha ukuthini xa ndibona i-222
Intsingiselo yenani leengelosi ezingama-222
Inombolo ye-444 yengelosi yothando inentsingiselo
Ithetha ntoni i-711